Itiyoophiyaa: Osoo biyya keessaa hir'inni jiruu bakkeetti erguun maaliif? - BBC News Afaan Oromoo
Biyyattiitti namoonni hedduun shukkaara argachuuf ni rakkatu.
Dhiheenya kana Ministeera daldalaa Itoophiyaa dabalatee, biiroowwan daldalaa naannoolee fi magaalotaa hundi shukkaara raabsaa jiru.
Gama biraatiin ammoo, biyyattiin kuntaala kuma 44 Keenyaatti erguunshee namoota baayyeef hiibboo taheera.
Biyyattiitti namoonni hedduun shukkaara argachuuf dararamu.
Rakkoon kun kan har'aa callaa miti, rakkoo waggoota hedduuf turedha.
BBCn dhiheenya kana magaalaa Finfinnee keessa, shamarree Leensaa (maqaanshee kan jijjiirame)hojii buna danfisanii gurguruun maatishee gaggeessitu dubbiseera. Hanqina shukkaaraan erga bunaa fi shaayii gurguruu dhaabdee torban lama guute.
Dhiheessa Korporeeshinii Shukkaaraan, tilmaama gatii Ministeerri Daldalaa baasuun; gandoonni, waldaaleen hojii gamtaa fi Itfiruut immoo ni raabsu.
Leensaanis kanumaa jecha yogguu gara gandaatti deemtee, shukkara gaafattu - deebiin 'hinjiru' akka ta'e dubbatti.
Suuqiiwwan irra jooruun yoogguu iyyaafattus, shukkaara kiiloo takka qarshii 28 - 30 tti gurguru.
Shukkaara argachuuf namoonni akkasiin magaalaa Finfinneetti hiriiru
Hongee ji'a Caamsaa keessatti uumameen walqabatee, Keenyaan mootummaa Itiyoophiyaarraa shukkaara kuntaala kuma 100 bituuf gaaffii dhiheessite. Isa keessayis kuntaalli kuma 44 ergamuusaa Daarektarri Komunikeeshinii Korporeeshinii Shukkaaraa, Obboo Gaashaaw Ayichiluhim ibsan
Akka jecha Obboo Gaashaawutti biyyattii keessa hanqinni shukkaaraa hinjiru. Fayyadamtootaaf ji'aan kuntaala kuma 569 akka dhiheessan dubbatu.
Warshaaleen Shukkaaraa Biyyattii keessa jiran kuntaala miliyoona 3.5 yommuu oomishan, miliyoona 2 kan tahu ammoo biyyoota alaarraa gala.
Fedhiin shukkaaraa biyya keessaa kuntaala miliyoona 6.5 yommuu tahu, kunis dabalaa dhufeera jedhu, Obboo Gaashaaw.
Itti dabaluunis, 'Seeraan ala shukkaarri gara Sudaaniifi biyyoota birootti deema. Daldaltoonnis bu'aa hin malle argachuuf tattaafachuunsaanii hanqina kanaaf gumaacheera.'' jechuun Obboo Gaashaaw BBCtti himan.
Biyyattiitti warshaalee shukkaaraa jahatu jiru. Gara fuulduraattis warshaaleen 8 akka hojii eegalaniifi hanqina hawaasaa kanas furuun akka danda'amus dabalanii ibsan.
Suuqiirra jooruun iyyaafannus, shukkaarri kiiloo takka qarshii 28 - 30
Waan ofirraa hafe kennu?
Mootummaan gama tokkoon hanqinni hinjiru jechaa jira, gama biraatiin ammoo hawaasni qabatamaan rakkoon akka jiru kaasaa jira. Rakkoon garam jirti ree?
Gaaffii kanas ogeessa diinagdee kan tahan Obboo Geetaachaw T/Maariyaam dubbisne - indastriin shukkaaraa biyyattii rakkoolee barootaaf turan qaba. Kanaanis, gama oomishtummaan fooyya'insa guddaatu barbaachisa jedhan.
Bara 2000 irraa eegalee, warshaalee shukkaaraa duraan turan foyyeessuu, babal'isuufi gama maashinariin jijjiiruun karoora qabamedha jedhu.
Akkas ta'eeyyuu, biyyattiin oomishni alaa galchitu, kan biyyattiin alatti ergitu caala jedhu Obboo Geetachaw.
Kana jijjiiruufis mootummaan haala olaanaa ta'een dalagaa jira jedhu.
Gaaffii 'maaliif osoo fedhiin biyya keessaa hinguutiin biyya biraatti ergu?' jedhuuf - 'biyyi tokko oomisha kan ergitu, yookaan kan galchitu, gabaa addunyaa akkasumas faayidaa biyyattiif kennu ilaaluun'' akka tahe eeruun, ''biyyi tokko kan ergitu, waan irraa hafeef miti.'' Jechuun dubbatu.
Akka fakkeenyaattis, Itoophiyaan Jibuutiif elektiriikii kan gurgurtu, waan irraa hafeef osoo hin ta'in faayidaa siyaasaa fi jijjiiraa alaa waan fiduuf jedhan.
'Haatahu malee, oomishoota kallattiin hawaasni itti fayyadamu kanneen gara biyya alaatti erguun, uummanni yoo ni dararama tahe, dhamaatii kana bu'aa dhabeessa taasisa.''
'Itiyoophiyaan shukkaara gara alaa ergite ennaa jedhamu, hawaasni shukkaara bituuf hiriiraafi yeroo qisaasutu itti mul'ata.''
Biyyoota tokko tokko irratti, gatiin kiiloo takkaa haga qarshii 40 gaha. Gara biyya alaatti erguun dura sakkatta'uufi karoora itti baasutu mala jedhu, Obboo Geetaachaw.
'Waggoota shanan darban keessa, oomisha shukkaaraa qofa osoo hin taane, adeemsi gabaas akkasuma walxaxeera.
Kana keessa kan miidhamaa jiru hawaasa. Gabaa hin tasgabboofne kana keessa gara biyya alaatti erguun, sababa gahaa waan qabu miti.'' jedhu Obboo Geetaachaw.
Yogguu gabaan tolu erguu, yommuu gad bu'u ammoo, biyyoota biroorraa fiduun waanuma jiru.'' jedhu.
Daa'imni gaa'elaan ala dhalatte beekamtii haadhaan ala guddifachaaf kennamte
Fedhiin gargaarsa namoomaa Affaar keessatti dabaluun himame